Iindaba zesiXhosa, 23 eyeNkanga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 23 eyeNkanga 2018
Written by Ashia Nkontsa on 23/11/2018
Amagosa onyango aziva engakhuselekanga kwiiLokishi zaseKapa
Amagosa onyango lokuqala athi aziva esebungozini xa esebenza kwiindawo eziquka i-Mitchells Plain, iKhayelitsha naseElsies River. Ezi zezinye zendawo ezidume ngolwaphulo-mthetho nalapho la magosa engavumelekanga ukungena engaphelekwanga ngamapolisa. Omnye wala magosa onyango uTracey Blakenberg uthi maxa wambi uye azive esesichengeni sokuphulukana nobomi ngokulinganayo nesigulana eso asinyangayo xa sukuba eye kunceda kwenye yeendawo ezibolileyo lulwaphulo-mthetho.
Nomzana Ramaphosa ukhusele uBathabile kwiKahabhinethi
Umongameli Cyril Ramaposa ufake amaxwebhu asenkundleni okukhabana nenyathelo leDA lokuba umphathiswa wesebe lamanina kwiOfisi kaMongameli unkosikazi Bathabile Dlamini aguzulwe esihlalweni. OkaDlamini wafunyaniswa yinkundla yomgaqo-siseko ethethe imposiso enkundleni malunga nebholo likaSASSA lentlawulo yezibonelelo zikarhulumente. uRamaposa ngethuba esenza iinguqu kwikhabhinethi yakhe izolo akamkhuphanga lokaDlamini nto leyo ingawaxolisanga kwaphela amaqela aphikisayo kuquka nomfela-ndawonye weemanyano zabasebenzi i-Cosatu.
Sebezofumaneka abarhanelwa ababandanyeka kutshiso loMyCiti bus
Ilungu lekomiti kaSodolophu wesixeko seKapa kwezothutho elingene ezihlangwini zikamnumzana Brett Herron, uFelicity Purchase uthi sele kumbhovu kunqakulwe abanye abarhanelwa ngokwayamene nokuntunyekwa ngomlilo kwebhasi kaMyCiti. Oku kuza emva kokubanjwa komrhanelwa kulandela ukutshiswa kwebhasi kaMyCiti eMilnerton. Ngokweengxelo, kugaxeleke amadoda amathathu kwibhasi yesixeko emileyo aza ayithi yiba ngamafutha ezithuthi ngaphakathi kuyo aza ayilumeka phambi kokuqhwesha. Ukanti, umqhubi uphume apho engabikwa hlaba.
I-EFF iphefumla kumalungu agcinwe kwiKhabhinethi engamaKhosikazi
Iqela leEFF likwamkele ukutyunjwa kukankosikazi Thembisa Stella Ndabeni-Abrahams njengomphathiswa, lisithi oku kubonakalisa ukuthenjwa kwabantu abatsha abangamanina antsundu nathe gqolo ukushiywa ngaphandle kwisigqibo eziphezulu. U-Abrahams ngumphathiswa omtsha wamasebe asandul’ukudityanyiswa, elezonxibelelwano kwakunye nelobuxhaka-xhaka bezonxibelelwano neenkonzo zeposi. Usomlomo weEFF uGqirha Mbuyiseni Ndlozi uthi bayakwamkela nokudityaniswa kwala masebe. Ukanti noko kunjalo okaNdlozi ukwavakalise udano malunga nokugcinwa kukamphathiswa uBathabile Dlamini kwakunye noNomvula Mokonyane nto leyo athi ibonisa ukungaselwa so kweemfuno zoluntu.
Abahlali baseKapa bagrogrisa ngokunga zibandakanyi noVoto ukuba iinkonzo zamanzi abazifumani
Bagrogrisa ngelithi abazukuzibandakanya kulonyulo lonyaka ozayo ukuba abakazifumani inkonzo zamanzi nogutyulo abahlali bemimandla yogobityholo kwisixeko sasekapa. Umnu.Sbu Mdlankomo wombutho ongekho phantsi kukarhulumente olwela amalungelo oluntu ,iSocial Justice Coalition (SJC) uthi ilungelo lamanzi lilungelo lokuphila. Ukutsho oku izolo emva koqhankqalazo lwabahlali obelusingise kwiziko loluntu lasekapa . Uthi kungokunje isixeko saseKapa siqhwatyelwa izandla malunga nezicwangciso zaso zokonga amanzi nngamazwe ngamazwe ngethuba bona abanawo.